PARSON RUSSELL TERRIER DOG FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA SY SARY - ALIKA
Augie the Parson Russell Terrier amin'ny faha-6 volana
Lisitry ny alika mifangaro Parson Russell Terrier
Fantatra tamin'ny anarana hoe the Jack Russell Terrier any Etazonia, ny anarana Parson Russell dia eken'ny American Kennel Club ankehitriny. Ny loha mafy dia tsara amin'ny ampahany amin'ny vatana. Mahery sy mahitsizoro ny vava. Ny fijanonana dia voafaritra tsara fa tsy malaza. Mainty ny orona. Ny maso maizina, miendrika amandy, antonony manana antonony manana molony mainty na mavokely. Ireo sofina miendrika V dia mivalona mandroso. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny tratra dia tery miaraka amin'ny halaliny lalina. Mahery sy mahitsy ny tongotra. Somary napetraka ambony sy voapetaka ny rambony, ka ny haavony dia manodidina ny haavony eo amin'ny karandohany. Fanamarihana: ny fomba fanao fanapahana rambo (docking) dia tsy ara-dalàna any amin'ny firenena sasany. Boribory sy toy ny saka ny tongotra. Ny palitao indroa henjana dia sady milamina no manana taratra. Ny lokon'ny palitao dia fotsy indrindra miaraka amin'ny marika mainty, tan na grizzle na fitambarana tricolor. Ny marika brindle dia fanilihana amin'ny peratra fampisehoana.
Ny Parson Russell Terrier dia alika falifaly, falifaly, be fandavan-tena ary be fitiavana. Fanahy sy mpankato, nefa tsy matahotra. Mitandrina sy mahatsikaiky izy, mankafy lalao sy milalao kilalao. Ny Stars Parsons dia sariaka ary tsara fanahy amin'ny ankizy amin'ny ankapobeny. Tokony ampianarina ny ankizy mba tsy haneso na hamely ny alika. Manan-tsaina izy ireo, ary raha avelanao haka iray santimetatra izy ireo dia mety ho tonga fanahy iniana sy tapa-kevitra handray iray kilaometatra. Zava-dehibe indrindra fa an'ity alika ity ianao mpitarika fonosana . Mila omena fitsipika arahana izy, ary ferana ny maha-izy azy sy ny toetrany tsy mahazo manao . Aza avela hilatsaka ao ity alika kely ity Syndrome kely alika , izay hinoany fa izy dia mpitarika ho an'ny olombelona rehetra. Io no hipoiran'ny olana isan-karazany eo amin'ny fitondran-tena, ao anatin'izany, fa tsy ferana fiambenana , snapping, fanahiana fisarahana ary ny fivoakan'ny saina mibontsina. Tena mahay miofana izy ireo, afaka manao fika mahavariana. Nampiasaina tamin'ny fahitalavitra sy sarimihetsika izy ireo. Na izany aza, raha tsy mampiseho fahefana amin'ny alika ianao dia mety ho sarotra ny mampiofana. Mila mpampiofana matanjaka sy za-draharaha ity karazana ity. Ny pararson navela handray azy dia mety ho mahery setra amin'ny alika hafa. Ny sasany namono na novonoina tamin'ny ady alika. Aza hadino ny manao fiaraha-miasa amin'ny Parson. Manana toetra voajanahary mihaza izy ireo (mahery noho ny salan'isa mahazatra anao) ary tsy tokony hatokisana biby kely hafa. Tian'izy ireo ny manenjika sy mizaha. Tandremo sao avelany hiala amin'ny fitarihana izy ireo raha tsy efa tena voaofana tsara. Parson Russell dia tia mitrongy sy mihady. Mampihetsi-po sy manimba izy ireo raha tsy voatazona am-bokony sy nampihetsi-po tsara . Mihanika i Parson Russells, izay midika fa afaka mihanika fefy iray izy ireo koa mitsambikina. Parson iray mahatratra 12 santimetatra ny haavony dia afaka mitsambikina mora foana ny tongotra dimy. Ny PRT dia tsy karazany ho an'ny tompon'alika tsy za-draharaha. Ny tompony dia mila matanjaka be toa ny alika, na ity tovolahy kely ity no handray an-tanana. Amin'ny tompony marina dia mety hihoatra ny Parson, saingy tsy atolotra ho an'ireo izay tsy mahatakatra ny dikan'ny hoe mpitondra alika tena izy. Ny pararsons izay milamina ara-tsaina, miaraka amin'ny instincine canine rehetra nihaonany, dia tsy hampiseho ireo fihetsika ratsy ireo. Tsy toetran'ny Parson Russell izy ireo, fa kosa olombelona nitondra fihetsika izany dia vokatry ny fitarihana tsy mahomby, miaraka amin'ny tsy fahampian'ny fanentanana ara-tsaina sy ara-batana . Hivelatra amin'ny asa tokony hatao izy ireo. Ny Parson Russell Terrier dia tsy maintsy mampiseho endrika velona, ​​mavitrika ary mailo. Tokony hampiaiky volana azy ny toetrany tsy misy tahotra sy falifaly. Tokony ho tsaroana fa ny Parson Russell dia mpampihorohoro miasa ary tokony hitazona ireo toetra ireo. Ny fahasahorana, ny hakanosana na ny fanaovana an-keriny be loatra dia tokony hahakivy ary tokony hiseho ho matoky tena hatrany izany.
retriever volamena sy ny Cocker spaniel Mix
Hahavony: 12 - 14 santimetatra (31 - 36 cm)
Lanja: 14 - 18 pounds (6 - 8 kg)
Ny sasany dia mora tratry ny fihintsanan'ny kneecaps, areti-maso nolovaina, marenina, Legg Perthes - aretin-kitron'ny alika kely.
Ny Parson Russell Terrier dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Ireo alika ireo dia tena mihetsika ao anaty trano ary hanao ny tsara indrindra amin'ny tokontany farafahakeliny farafahakeliny.
sinoa shar pei lab mix
Ny Parson Russell Terrier dia mpiara-miasa mahafinaritra rehefa ampiharina tsara kanefa raha tsy ampy dia mety hanakorontana. Ny alikanao dia mila entina amin'ny lava, isan'andro, haingana MANDEHANA . Ho fanampin'izay, ho eo amin'ny voninahiny miaraka amin'ny habaka mihazakazaka, mihaza ary milalao izy.
Raha avela irery ny Parson amin'ny antoandro, na ao amin'ny trano na trano izy io, dia tokony ampiasaina tsara alohan'ny handehanan'ny olombelona hiasa amin'ny alàlan'ny mandeha an-tongotra lavitra na mihazakazaka , ary avy eo dia avoaka indray rehefa mody.
Ankizy kely 6
Ny karazana palitao rehetra dia mora karakaraina. Manosotra sy miborosy matetika amin'ny borosy mafy volo, ary mandro raha tsy ilaina. Mba hampisehoana dia tsy maintsy esorin'ny tompony ny palitao. Toy ny palitao marokoroko dia mila esorina koa ilay Parson nopetahany paty. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Parson Russell Terrier dia fantatra tamin'ny fomba ofisialy hoe Jack Russell Terrier any Etazonia. Ny karazana dia nomena anarana taorian'ny mpitondra fivavahana iray antsoina hoe Rev. John Russell. Izy io dia nampiasaina ho alika fihazana lalao kely indrindra ho an'ny amboahaolo mena, nandavaka ny vatokaravo tany an-davaky ny tapaky ny taona 1800. Amin'ny alika haza anglisy, ny alika dia mila lava tongotra lava mba haharaka ny hazondamosina. Ny karazany dia nanana fanamafisana mafy tamin'ny fahaizany miasa, noho izany ny fenitra dia malalaka tokoa, mamela karazana karazan'olona ekena. Rehefa te-hanao henjana ny endrik'ireo alika ireo mpiompy fampisehoana dia nanapa-kevitra ny hanova ny anarany izy ireo hanasaraka ireo karazana fampisehoana amin'ireo karazana miasa. Nanomboka tamin'ny 1 aprily 2003 dia niova ny anarana Jack Russell Terrier ho Parson Russell Terrier araka ny fangatahan'ny Jack Russell Terrier Association of America, izay novaina ho Parson Russell Terrier Association of America. Ny sasany amin'ireo talentan'i Parson Russell dia misy: mihaza, manara-dia, mailaka ary manao fikafika.
Nisy fotoana niantsoan'ny AKC an'i Parson Russell Terrier ho Jack Russell Terrier. Na izany aza, ny volana aprily 2003 dia novain'izy ireo ny anarana hoe Parson Russell Terrier ary nizara roa ny karazany, ary namorona karazany roa samy hafa: ny Jack Russell sy ny Parson Russell Terrier. Ny fanovana ny anaran'ny Parson dia ampahany lehibe amin'ny fanenjehana avy amin'ny JRTCA mankany amin'ny AKC, raha navela hisoratra anarana ny karazany. Ny Jack Russell Terrier Association any Amerika teo aloha dia nanapa-kevitra ny hanova ny Jack Russell Terriers ho Parson Russell Terriers nanomboka ny 1 aprily 2003. Nanova ny anarany manokana ho an'ny Parson Russell Terrier Association any Amerika izy ireo. Ny FCI, ANKC ary IKC dia manaiky ny kilaoty fohy toa an'i Jack Russell Terriers ary ny UKC dia nahafantatra ny fohy toa an'i Russell Terriers. Ny Parsons dia i Jack Russell Terriers manana tongotra lava antsoina hoe Parson Russell Terriers amin'ny fomba ofisialy. Ny Jack Russell Terrier sy ny Russell Terrier dia karazany iray ihany, fa samy hafa tanteraka amin'ny Parson Russell Terrier. Any Angletera, ny Jack Russell sy ny Parson Russell dia karazany roa samy hafa foana. Ny Jack Russell dia matetika kely kokoa ary nompiana hisambotra voalavo. Ny Parson dia miara-miasa amin'ny hounds. Ny AKC, toy ny UKC, dia manaiky izao antsoin'izy ireo hoe Russell Terrier , izay manana tongotra fohy kokoa noho i Parson Russell Terrier.
Jazmine the Parson Russell Terrier puppy amin'ny 9 herinandro
Jester the Parson Russell Terrier ho alika kely amin'ny 7 herinandro mitsambikina amin'ny tongotr'ireo tompony
'Ity no sary nalaiko tamin'ny Reign-Bo anay. Izy dia tricolor mahafinaritra 7on taona Parson Russell Terrier. Reign-Bo dia matoky tena, matoky tena ary mahay mandanjalanja. Izy dia tena matanjaka ary vonona hilalao foana. Tsy miraharaha firy an'ireo alika mahery setra hafa izy ary hijoro tsara raha tojo fanamby. Mandatsaka izy fa ny volony toa tsy miraikitra amin'ny zava-drehetra toy ny karazany hafa. Tena tia ankizy izy ary manam-paharetana amin'izy ireo. Izy koa dia mifanerasera tsara amin'ny vorona katsaka sy guinea pig izay somary fahita amin'ny Parson Russell Terrier. Tiany ny soavalinay ary tian'izy ireo koa izy. Mpinamana mahafinaritra sy mahafinaritra izy ary tena tianay izy. '
Ity i Lopresti Chase, alika kely enim-bolana izay fananan'ny fiompiana Lopresti.
GREWCH CH Corn Row Tyler, sary natolotr'i Pamela Simmons
black shar pei pitbull mix
Hijery ohatra misimisy momba ny Parson Russell Terrier
Parson Russell Terrier Sary 1
Parson Russell Terrier Sary 2
amboadia amboadia mifangaro alika kely amidy
Alika kely mpanao ady totohondry 8 herinandro
fotsy frantsay bulldog feno lehibe
bulldogge anglikana taloha amidy
mpiandry ondry aostraliana shiba inu mix
afangaro amin'ny laboratoara amerikanina bulldog